डोल्पाकी सुन्दरी टसी डोल्मै बसेर बोल्छिन् यत्ति मिठो तिबत्तियन भाषा, अस्पातल नपाएर आमा गुमाउँदाको कुरा गर्दागर्दै रोईन् (भिडियोसहित) – Online Nepalaja
डोल्पाकी सुन्दरी टसी डोल्मै बसेर बोल्छिन् यत्ति मिठो तिबत्तियन भाषा, अस्पातल नपाएर आमा गुमाउँदाको कुरा गर्दागर्दै रोईन् (भिडियोसहित)
February 2, 2021 121
डोल्पा । ‘म सानैदेखि परिवारबाट टाढै बसरेर हुर्किएको हँ । त्यसैले मेरो बुझाईमा जीवन भनेको पढेर भन्दा भोगेर बुझिने कुरा हो । सानोमा जस्लाई पनि आमा बाबा भन्थें । ठूलो भएपछि मात्र थाहा पाएँ मेरो आमा बाबा त अर्कै हुनु हुँदोरहेछ । जब मलाई अर्कैले पालेको कुरा थाहा पाउने भएँ तब नमज्जा त लाग्यो नै तर फेरी सम्झिएँ मेरो आमा बाबाले जे गर्नु भयो सायद त्यो मेरोलागी राम्रै गर्नु भयो ।’ यो भनाई हो डोल्पाकी टसी गुरुङ्गको । टसी सानैबाट अर्काको घरमा बसेर पनि प्लस टूसम्मको पढाई पुरा गरेकी छन् ।
सुन्दरतामा निकै नै राम्री टसीको बोल्ने शैली पनि निकै नै मिठो छ । उनले नेपाली भएर पनि टिब्बेतियन भाषा प्रष्ट रुपमा बोल्न जानेकी छन् । उनको भनाईमा मेहेनत गर्न कहिल्यै पनि पछि पर्नु हुन्न । अर्काकै घरमा काम गरेर भएपनि मेहनत गरेकै हुनाले आफु यो स्थानसम्म आई पुगेको उनी बताउँछिन् । टसीलाई टिब्बेतियन भाषा प्रष्टसंग बोल्न आउँछ । उनले डोल्पादेखि टिब्बेत नजिक भएको हुनाले आफुलाई टिब्बेतियन भाषा बोल्न आएको हो ।
उनको गाउँमा आउने टिब्बेतियनहरुले उनलाई चाँनिज भन्ने गरेको कुरा पनि टसीले हाँस्दै सुनाईन् । आफ्ना कुरा गर्दागर्दै टसीले डोल्पामा अस्पताल नभएको हुनाले आमाले सामान्य उपचार पनि नपाएर ज्यान गुमाएको कुरा गरिरहंदा उनी रोईन् । उनले डोल्पामा विकास नभएको कुरा पनि गरिन् । आमालाई बचाउन नसकेतापनि अब बाबाकोलागी केही गर्ने इच्छा भएको टसी बताउँछिन् । उनले अहिले प्लस टूको नतिजा पर्खिएर बसेकी छन् । भिडियोसहित
Prevकाममा रोकावट आइरहेको छ ? सफलताका लागि मंगलबार गर्नुहोस् यी काम…
Nextइन्डियन आर्मीको जागिरे श्रीमानलाइ छोडेर भागेकी श्रीमती र श्रीमान एकै ठाउँमा भेट भए, श्रीमान र श्रीमतीले गरे यति मिठा कुरा र सधैका लागि छुट्टीए (भिडियो)
केटी केटी बिच भयो बिहे भन्छ्न हामी घेरै खुशी छौ हेर्नुहोस भिडियो
अन्तत बाहिरियो भागरथीको पोष्टमार्टम रिपोर्ट! के हाेला अब?
नदीमा माछा मारेर गुजारा चलाउने माझीलाई पाचँ करोड राजस्व छलीको मुद्दा !
फिल्म राजा हिन्दुस्तानी रिलीज भएको २४ बर्ष पछी थाहा भयो यस्तो पर्दा पछाडीको वास्तविक कुरा… (3196)
क्यामेरामा रेकर्ड नभएको भए कसैले पत्याउने थिएन यो घटना, जान्नका लागी भिडियो सहित पुरा हेर्नुहोस (2864)
प्रयोग भइसकेको क’ण्ड’म बटुलेर महिलाले गर्थिन यस्तो काम, प्रहरी पर्यो चकित् (1479)
लाइसेन्स निकाल्दै हुनुहुन्छ भने फेरी आयो नयाँ नियम (1066)
‘मेरो बुढीको गो’प्य अं’गको फोटो त्यो मान्छेको मोवाईलमा कसरी गयो’, भेटियो थुप्रै प्रमाण (भिडियो) (619)
सुतेका थिए उनि….. तर उठ्दा विश्वभर भाइरल भैसकेका थिए (तस्विर सहित) (475)
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ : पढ्नु’होस् (430)
भाइरल हुनकै लागि यी युवतीले जे खाइन हेर्नुहोस (399)
प्रदेश ट्राफिक कार्यालय भरतपुरमा (382)
पूरा हेर्नुहोस मात्र9लाख 99 हजार मा घर बिक्रीमा (353)